Ekonomikon | ny tsy manam-petra tontolo izao voarindra
Posted in fahefana . vola . karma dia . Zava-poana . Ekonomikon
Ao amin'ny sehatra lehibe ampy, mitaky ambony ny fahalalahana Fitondran-tena, misy fakam-panahy hamitaka Nature, ary, voafehy ny tsara indrindra amin'ny rehetra ny toerana misy, manary “vokatra ny asa tena ilaina ny manokana” ny tompon'ny lehibe mety. Fialana toy izany ny fanapahan-kevitra ny fanerena asa, dia ny vokatry ny asa mivantana.
Fandatsahana ny olana hafa biolojika zavamananaina, firazanana na firenena mahay mamela hadio foana sy ny harena, kanefa noho ny vola ny hafa. Misy universes, dia tonga izany. Just mifidy mipongatra hazakazaka tamin'ny fananana hery anaty lehibe ary manome be dia be azy sy ny olana manokana. Ny paika fampiharana miteraka fanolanana, mandeha foana ny fahavalo afa-maina, ary ny tsy manan-tsiny niharan-doza tanteraka hanavotra ny mahatonga ny olon-kafa ny heloka bevava.
Ny fampiasana ny rafitra ny Reincarnation sy ny fahafahana, vokatr'izany eo amin'ny tontolo hafa izy ireo hitantana ny heloka sy fahadisoana ny hifindra any amin'ny planeta hafa na Worlds, raha mitoetra ho madio eo amin'ny taniny. Noho izany mety ho zava-manahirana ny fiainana be dia be tsy ilaina ny ho faty. Izao no mampivelatra rafitr'ity tontolo ity drainage ny Karma tamin'ny hazakazaka tonga lafatra kokoa, firenena, ny fandrosoana, amin 'izany tsy dia fongana lasa perspicacious sy planeta Worlds.
Ny mponina amin'ny planeta samihafa, Nampitambatra ny karma dia ho ambany noho ny rafitra (izay kosa ihany koa afaka hamindra “lo anjara-raharaha” azo jerena ao amin'ny fandrosoana), farany lasa ny instigators sy nahavita ny fandringanana na ny fanjavonana, fara fahakeliny baovao ny Ras na planeta.
Toy izany koa famindrana “fotaka” nandinika ao amin'ny sehatry ny tanjony ny Karma. TK. dia tsy azo atao ny maka fotsiny dia hanipy ny tsiny noho ny heloka izay na inona na inona hazakazaka – mampihatra tetika isan-karazany. Ny tena zava-mahagaga, fa “faribolana ambony” izany fahazoan-dalana, ka misy antony. Ao amin'io vahiny Karma fuses voalohany indrindra amin'ny “ny lavo” sehatra ny fiaraha-monina, izay ny ankamaroany mihazona ny fahefana hafa sosona. Amin 'izany dia afaka manorina rafitra misy faneren'ny ho an'ny fiaraha-monina ny sisa. Izay tatỳ aoriana, mba hiova fo ho toy izany koa “Products biodegradation” Ahoana no vlastvuyushtie “fampirantiana”. Manao faribolana fitondrana ampahany isan'andro famonoana-draharaha isan-subservient, amin 'izany fitadiavam-bola sy ny tombony, satria “mialoha ny rehetra amin'ny ambaratonga lo”, Miaina be dia be.
Izany rehetra izany no antony iray ihany: fanitarana ny ara-pahasalamana sy mahasoa zavamananaina, arakaraka “niteraka vokatra ny simba” Izany dia fanomezana ny hery sy ny vaovao, izay ilaina ho an'ny fiainana sy ny fampandrosoana ny sosona ambony. ohatra, ny herin 'ny fiainana sy ny siansa no tena nahafantarana vaovao, izay mandefa nijery ny lanitra ho an'ny fampandrosoana ny mety “biolojika santionany”, fa izay tsy natao ho voafetra fomba fisainany ny mpitondra faribolana, izay manorina hery, voalohany indrindra, ny isan-karazany ny herisetra, mivantana sy tsy mivantana nefa. ary ny “ny voankazo voarara” Tsy saro-kenatra izy ireo “manitsaka ny faty, dia ny mpifehy”. Dia toy izany no nandravany ny fanantenana sehatra, ary okupiruya taniny, “rehetra izao klutz” hahazo ny teknolojia vaovao sy ny fomba fitohizan'ny fiainana bebe kokoa, mamela sivilizasiona toy izany mba hivadika ho amin'ny tena.
Noho ny fanasokajiana ny vaovao ilaina degenerated fandroana nampanginina. Raha mitantana, mba hanalana sarona “asa rehetra ny hery” – sasany subspecies ny degenerative hantsoiko ny tsy firaikan'ny: otgovarivaty, resy lahatra ny tsinontsinona, churn fihetseham-po, mandrahona etc.. Raha tena mino, fa izany rehetra izany dia tsy misy dikany ary tsy mila – nahoana ireny no mifikitra amin'ireo fanontaniana ireo; aoka hiady tsara kokoa amin'ny voalavo ao amin'ny lakalin'ny maloto (satria ilaina ny fiarovana sakafo), na hitolo-batana ny andevo manampy Olona novana. Mety ho, raha manao izany ny tenany prozombiruyut manifinify famitahan-tena – porofo amin'ny alalan'ny ohatra, fa mahasoa.
mifandray, isan-karazany andrim-panjakana dia afaka handresy lahatra ny mpanara-maso tsotsotra izay, fa misy zavatra manan-danja sy tsy mampino. Raha ny fahafahana mieritreritra amin'ny taova toy izany fa tsy manan-kery – Ary mino ny rehetra, dia nametraka ka tonga mpanompo “rafitra”.
Ny fananana eo amin'ny tanana maro ny andrim-panjakana ny fahefana, dia afaka milalao toe-javatra isan-karazany: krizy, famonjena, fanafihana, fifandirana, “hatsiaka” ny ady, “mafana” ny ady, understatement, difitsit, be dia be, etc.. TK. ara-dalàna ny olona, Izy no lohany, miezaka ny tsy ireo lalao hafa – ny mpitarika dia miezaka ny manendry “ny sembana” ary “voafetra” in mieritreritra. Iza fahaizana mifehy ireo na dia handray anjara amin'ny lalao iraisam-pirenena, izay mamela anao mandresy lahatra mpanara-maso ny zava-dehibe sy mahasoa ny zava-mitranga, na dia, izao tontolo izao raha ady. Fiakarana “ny sembana” amin'ny fahefana “tehina” Tsy mamela ny fitarihan-drano tsara kokoa Kontinanta “izvraschenskih vokatra ny biodegradation”.
Ny haino aman-jery dia afaka mamorona mpaminany na be pitsiny, saika isan'andro. Nadressirovannye “hamsters” avy ao amin'ny sampan-draharahan'ny fiarovam sy ny fivavahana isan-karazany izy ireo dia afaka milalao saika misy antoko mifandray amin'ny tsy fifandraisana fampitana hevitra teny lavidavitra teny, soso-kevitra, faminaniana ny, Efa nikasa andrim-panjakana hafa, halatra ny olon-kafa ny eritreritra sy ny hevitra ho tombontsoan'ny “fanjakana” (Mafia, fehezin'ny governemanta). ohatra, taova, afaka tonga mifandray amin'ny hafa na firazanana sivilizasiona avy amin'ny planeta hafa, Mety ho voafitaka fotsiny ny ravings ny vondrona ara-tafika manokana, izay tafiditra ao amin'ireo olana. izany hoe. rehefa nanomboka nitombo ny olona hendry ka nandeha tafaporitsaka – dummy fifandraisana azo fandaharana, izay hoy izy ireo, fa “tsy maintsy miandry hafa 100 taona talohan'ny-pihaonantsika indray, ary mbola ho andevo”. Fifandraisana toy izany dia azo nokarakaraina be dia be ho an'ny faobe, dia nila, olon-dratsy mety ho faty voajanahary tsy misy olana ny fahafatesana sy ny amin'ny voninahitra. Ny tena zava-mahagaga – dia miasa.
Information leakage miaro azy ireo very saina cretinism. Tsy Mora kokoa ny hanendry ny lohan'ny deranged nerd ka ho velona amin'ny lany ny an'arivony unsold zavamananaina, toy izay hanao zavatra ilaina. Parasitism dia faly eto an-tany ny fahafatesana.
Rehefa tonga ny fotoana ho amin'ny fanovana ny hery, ary misy olona iray handray “seza fiandrianana” – misy ezaka manafoana kandidà, vaovao amin'ny teny governemanta dia manomboka hampiroborobo toy izany koa “mpaminany teo aloha”.
Ny tena ilaina sy ny fanantenana zavamananaina, izay manangana Space araka izay mahamety azy, toerana ny fanaterana ny angovo sy ny vaovao, nangalatra manome sakafo ny rehetra Universes, Na ny toetry ny ny planeta. in fohy, mari-pahaizana ambaratonga halatra no mamaritra ny ho avy ny fandringanana. Indraindray dia mitranga, fa ny Fanjakana, izay nitondra kely sahaza sy ny lojika politika, tampoka manomboka tsy misy antony dia tsy mitondra tena mampiavaka sy hanana ny azy manokana na ho an'ny faritra nankahala teo aloha – izany dia midika hoe, nangalatra vaovao izy ireo tapa-baovao sy miezaka hangalatra avy izay hanjo, izay izany no natao. Mazava ho azy ihany izany no handeha hamonjy ny “siny hoditra”: “amin'izao fotoana izao, toerana, ny, Inona no mba hanadio anareo sy mamirapiratra, manao (amin'ny 99% fatiantoka) “slop lohany” ary amin 'izany tsy maintsy hovelomina, raha tsy izany izy ireo no hanosika ny bokotra – Khan sy ny manodidina! azoko?” ary, mety, Nearby ny vatana amin'ny alalan'ny rehetra velona. Angamba noho ny aminareo, na izany rehefa manoratra, monina iray na ny firenena iray manontolo tanàna. Ary na dia tsy misy ny halatra ny vatana ho an'ny fampandrosoana ny angovo ilaina sy ny loharanon-karena dia ho hita fa ny firenena iray manontolo na ny Izao Rehetra Izao. fa, Asehon'ny antontan'isa, sarotra ny manohitra ny fakam-panahy hangalatra azy ireo. Ao amin'io mahaliana ny olona ho hajaina. Na izany aza, noho ny miaina rehetra tontolo izao voarindra. Ary tia ady sy ny andrim-panjakana lasibatra mangalatra olon-kafa ny anjara sy nafana fo indrindra mpitantana sy ny mpitantana sazy fandroahana avy amin'ny Universal, Fiainana ny toerana sy ny habakabaka Planet, izany hoe. miavaka Exile. “Nangalatra ny olon-kafa ny nanjo? Tsy te-hiaina ny anjara? Noho izany dia tsy te ho velona sy ianao Tsy misy raharaha eto.”
Am-piandohan'ny ny mpanao asa katsentsitra zavamananaina gaga fahaiza-manao “Madio sy mamirapiratra” ka ho lavo an-afa-baraka, satria, fa tsy mba dia tsy afaka hahatratra ny mitovy fari-. Inona no nanosika azy ireo ny fepetra rehetra:
1. Dia manomboka hamono sy mihinan-kena (Ahoana no kanibalы) amin'ny fanantenana, fa ny fahaizana sy ny hery dia nafindra tany amin'ny, izay mihinana ny hena.
2. Taorian'ny fahadisoam-panantenana noho ny hevi-diso ny fomba fijery kanibalskih halatra manomboka ny teknolojia sy ny zavatra ara-kolontsaina, amin'ny fanantenana fa afaka haneho ny tenany amin'ny nifandray ireo zavatra.
3. hevi-diso hafa. Ny halatra sy ny fanolanana ny malemy karazana miavaka solontena. Ao amin'ny fanantenana fa ho hiteraka ny ankizy toy izany koa mahay. Rabovladelcheskyy Tantara.
4. Ny famongorana ny vahoaka sy ny fandraofana ny faritany.
5. Ny halatra sy ny fandringanana ny fananana ara-kolontsaina sy ny teknolojia sy ny manaraka amin'ny alalan'ny famoahana n-jato taona ho an'ny ny vondron'orinasa. Noho ny fanodinana “Madio sy mamirapiratra” ho zavatra “Brown”.
Lalàna maharitra olom-pirenena, natao teo ambanin'ny “vodopadami” lo mety, Izany dia mitondra ny lohateny hoe afa-tsy ny famongorana ny vatana ihany, na ny fianakaviany toy ny onitra, TK. amin'ny “lalàna” Etsy an-lalàna tsy. Avy eo tonga ny fiovam-po ny “Madio sy mamirapiratra” ho zavatra “Brown”. noho ny “fiovana” singa mahasoa rehetra mitsahatra misy, ary ny toerana dia naka ny taranaky ny fivavahana amin'i Satana sy ny taranany. Noho ny zava-mitranga eo amin'ny lafiny amin'ny fandringanana haingana ny manodidina izao tontolo izao.
ny maha- mety ny ara-toekarena.
Misy fanjakana manao ny tsy marina, mba handringanana ny fahavalony eo anatrehan'ny hafa firenena, vola ampahany ny teti-bola ho an'ny olona “naoty ambany” ary “ny lavo” sehatra ny fiaraha-monina (thuggery, hosoka, fivarotan-tena, fanelezana zava-mahadomelina sy ny zava-nitranga mahay kokoa). izay manohana, rehefa roa taona maro any ivelany, na any amin'ny faritra fialan-tsasatra dia afaka ho re, hahita sy hahatsapa miraharaha, mitongilana, tsy ara-kolontsaina, Tsy misy fifandraisana amin'ny hafa firenena, izay efa foto-kevitra amin 'ny famongorana. Izany dia nitranga noho ny antony tena tsotra,: izay taona maro, mandra-toe-javatra tsy mazava, Nitsidika ny olona ambany sy ny faritra ala nenina firenen-kafa, raha fihetsika ho toy ny toetra mampiavaka azy, Mazava ho azy fa ny, namorona fifandraisana manokana ny olona rehetra mifandray. Noho izany ara-kolontsaina sy nahita fianarana ny olona any amin'ireo firenena ireo sy ny ala nenina toerana manao na inona na inona intsony, TK. lafiny fandraisana ho toy izany koa “nyzshym kilasy”, fomba, nitsidika azy ny olona mandroso. Ny hatsaran-toetra ny zavatra lasa zava preukrashen iraisam-pirenena. Ary raha ny marina dia tsy tena ilaina, ary, TK. tsy misy tombony manokana dia tsy ho. ka rehefa?
Noho izany ny ara-toekarena aza mandringana ny maha- mety ny afaka ihany ny fahavalo firenena, fa ny firenena rehetra eto an-tany, Raha ny kajikajy mba mametra-tena ho planeta iray monja.
Nandinika necrotic Reincarnation misy azo atao hahazoana handalo fandovan. izay “mpiandry” kerisetra karma dia toy izany fitaovana. niorina tamin'ny andrana, fa raha ny fahafatesan'ny iray amin'ireo havany rehetra ny fahadisoany sy ny kileman-toetra (izany hoe. karma dia) “miankohoka” ny lohan'ny fianakaviana, ary izany dia mitranga ao amin'ny ampahany sasany. Ny tena mahaliana eto ny mahita vidin-javatra. “Andriamanitra tsy afaka ny fitsapana tsy hanome.” ao amin'io “Carmen distribution fototra” miseho ny hitsimoka indray izy manao asa masina, ary ny, izay no smartest, mahabe fanantenana sy mafy toto lavo eny azo atao olana (izany hoe. na izy rehetra na ny sarotra indrindra), ary ny hafa koa, “nachislyayut” araka izay azony atao, ihany muddle tsy hitondra zavatra. satria: “tsara, Inona koa no?” Noho izany avy amin'ny fomba fijery iray taova mahazatra dia afaka ny ho fomba hisakanana. Ny famelana ny torotoro fo eo ny fotsy faobe “indraindray hipoaka taratra zetovskih upstarts”.
Tokony ho voasambotra koa any an kaonty, fahatsiarovan-tena, mora fahapotehana, any amin'ny fiainana ho hanana fahafahana handeha ny alalan 'ny fahadisoana rehetra indray, izay ao amin'ny tightened endrika fanampiny. Raha any amin'ny firenenao tsy misy miasa ny hadisoan'ny olona hafa (tsy dia mifandray aminareo) – dia azo hafindra ho anao, raha manana fahafahana ampy. Total isika X = nX + + + S1X CX S2X…. (aiza n- Eo anelanelan'i 2 ny Infinity tsy amin'antony. bibikely rehetra dia mifindra amin'ny mety maharitra sy ny fiainana ny, Izay nanao azy; amin'ny, S1, D2 – Eo anelanelan'i 0 ny 0,99, TK. Izany fizarana ho an'ny fahadisoana tsy azo atao fanantenana, X – amin'ity tranga ity dia tsy tapaka isa, mitovy 1, 5 na 25) Noho izay misy mivandravandra fanontaniana: rehefa 25 Tsy mbola 188 na Infinity? toa, fa tsy misy afa-tsy ny olona ao amin'ny sekoly dia tsy nampianatra matematika. Noho izany tsy mampino matematika niavaka zamalchichaniyam misy mpitondra afaka manao ny mahazatra “voalavo kely fotsy kely”. Ahoana ny hevitrao: mba hiatrehana ny toe-javatra iray mampiavaka ny Karma Institiota an-tsesitany amin'ny fitondrana sy ny fahefana mpanatanteraka dia ho ampy?
® ™ mpamonjy voina.
Ao anatin'ny sehatry ny iraisam-pirenena hisambotra faniriana sy TV terorizma, misy faniriana handroba na manandevo rehetra. Fa ireo tanjona, mamonjy ny fikambanana, fa tsy manam-paharoa fomba entana ao paosin'ny hafa. Raha toa ny fikambanana iraisam-pirenena an'i famonjena ny firenena na ny vondrona ny firenena – ny iraisam-pirenena dia azo ampiasaina asany handrava fahavalo, na dia ny fahavalo tsy fahavalo, ary ny mponina, izay manana ny lehibe indrindra “fitaovana sy ny atidoha trano fanatobiana entana”, ny fortiori, izay, Azo inoana fa, voalohany dia ho tsara, ary ny foto-kevitra momba “mpamonjy” ho azy ireo dia ho masina.
Matetika, ireo fikambanana iraisam-pirenena niresaka momba ny “Interpol” na “Interpol” izany hoe. iraisam-pirenena ny polisy. polisy – masina io amin'ny biraon'ny “planeta ny fahafatesana”. Noho ny, Rehetra toy izany fikambanana tsy manao ny asa araka ny tokony ho – dia mila mandeha amin'ny alalan'ny iray mahazatra an-tsesitany sy ho tsara kokoa fahombiazan'ny fampiasana metioritny orana, izany ihany koa na dia ekena fipoahan'ny volkano sy ny tondra-drano. Tsy maintsy ho toy izany koa iharan'ny fandroahana “tsy mendrika” , noho izay misy ny mety ny fisian'ny fikambanana rehetra ireo bufatornyh.
Strong panjakana antoky ny fahombiazana, mafy orina sy ho Sambatra?, afa-tsy tsy misy farany Space Tsy tena afaka manome fahamarinan-toerana sy ny ho tena sambatra ny olona rehetra.
· 0 • ● ⊡ ▲ Yello – Roahy noroahina ▲ ⊡ ● • 0 ·
Jolay 2012 – Septambra 2013 ny taona ao amin'ny kalandrie gregorianina.